विप्लवको भेटवार्ताः वामपन्थी एकता कि सहमति कार्यान्वयनको खोजी ? - Kantipath.com
वामहरुको एकता तत्काल सम्भव नभए पनि गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्न सक्ने उहाँको बुझाइ छ । विश्लेषक श्रेष्ठ माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीचको ‘एलायन्स’ सम्भव देख्नुहुन्छ । “चन्द सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोमा हुनुहुन्थ्यो, सशस्त्र सङ्घर्ष त्यागेपछि उहाँको बाटो के त अब ? त्यसो भएकाले यी तीन पक्षबीच गठबन्धन हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पार्टी एकता हुन सक्दैन ।
Previous Previous post: आज प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको ३९ औँ स्मृति दिवस
Next Next post: परिस्थिति सामान्य बन्दैछ : दक्षिण अफ्रिका सरकार
दिउसै नयाँ बसपार्क काठमाडाैँमा खुलेआम यौनधन्दा यसरी हुन्छ (भिडियाेसहित)
चुमनुब्री गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस विजयी, गोरखामा काँग्रेस अगाडि
अस्पतालको आइसोलेसनबाट कोरोना सङ्क्रमित भाग्नुको यस्तो छ रहस्य
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले खोलामा फाल्यो १० बोरा औषधि